Kabtanka kooxda Chelsea Gary Cahill oo codsaday in si deg-deg ah looxaliyo xaalada Antonio Conte – Gool FM
Kabtanka kooxda Chelsea Gary Cahill oo codsaday in si deg-deg ah looxaliyo xaalada Antonio Conte
Dajiye May 21, 2018
(Chelsea) 21 Maajo 2018. Kabtanka kooxda Chelsea Gary Cahill oo codsaday in si deg-deg ah looxaliyo xaalada Antonio Conte oo ay saxaafada sheegtay inuu ka tagayo Stamford Bridge, si ay ugu diyaar garoobaan xili ciyaareedka cusub.
Gary Cahill ayaa yiri: “Si loo xaliyo shakiyada jira, waa in wax walba la sameeyaa, nooca ay doono ha noqdee”
Kabtanka kooxda Chelsea ayaa wuxuu sidoo kale ka hadlay guushii ay ka gaareen finalka FA Cup kooxda Man United wuxuuna yiri: “Waxaan seegnay waxyaabo badan xilli ciyaareedkan, laakiin si wacan ayaan u ciyaarnay sabtigii”.
Ka dib markii ay ku guuleystay Chelsea horyaalka Premier League xili ciyaareedkii ugu horeeyay Antonio Conte, waxaa hoos u dhacay qaab ciyaareedka Blues ee xili ciyaaredkan, kadib markii ay kaga dhameysteen dhanka kala sareynta booska 5-aad.
Blues ayaa waxay xaqiijisay in xili ciyaareedka xiga aysan qeyb ka noqon doonin Champions League, waxayna arintan imaaneysaa kadib marka la sheegay inuu khilaaf soo kala dhex galay Conte iyo maamulka kooxda sababa la xiriira suuqa kala iibsiga , sidoo kale macalinka iyo ciyaartoyda.
Cahill ayaa hadalkiisa kusoo xiray: “Wax walba ee aan doonayo inaa iraahdo ayaa ah in xili ciyaareedkan aan ku dhameesanay si wanaagsan”.
Steven Gerrard oo fariintaan u diray ciyaartoyda Liverpool ka hor Final-ka Champions League
Jorge Sampaoli: “Lionel Messi wuxuu sugi la’ayahay ka qayb galkiisa koobka aduunka 2018”